Dalka martigelinaya wadahadalka DF iyo Somaliland oo la shaaciyay
HARGEYSA, Somaliland - Madaxwaynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in wadahadalka maamulkiisa iyo dowlada dhexe ee Soomaaliya uu 19-ka bishaan Maaj ka bilaabanayo magaalada Accra, caasimada Ghana.
Muuse Biixi ayaa intaasi ku daray in wadaxaajoodyada ay garwadeen ka noqonayaan Midowga Yurub, Mareykanka iyo Ingiriiska, iyada oo isku daridka shirkaasi uu leeyahay wadanka Turkiga.
"Shirkaasi waxaa lagu dhisayaa Guddi caalami ah oo kala dhex-gala Soomaaliya iyo Somaliland," ayuu yiri Biixi, kaasi oo intaasi ku daray "Muqdisho waxay ka dagaalameysaa arrinkaas".
Hogaamiyaha maamulka gooni isu taaga ah ayaa qiray in dhowr jeer ay wada hadleen Madaxwayne Maxamed Farmaajo, wallow uusan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan qaabka uu dhacay.
"Isaga [Farmaajo] wuxuu mar walba sheegtaa in lagu kulmo Ankara iyo Dooxa," ayuu raaciyay Muuse Biixi oo daba dhigay hadalkiisa "Markii ugu dambeysay Turkiga waxaanu ku niri 'kaligaa ku aqbali maynee caalamka kale u yeer'."
Marka laga soo tago shaacinta Muuse Biixi ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhinaca xukuumada federaalka ah ee Soomaaliya.
"Tani [shaacinta] waxaa nagu qasabtay waa arrin culeys iyo walwal nagu haysa…oo ay tahay in aanu ogaano mowqifkeena," ayaa laga soo xigtay Madaxwaynaha Somaliland.
Wadahadaladii ugu dambeeyay ee dhex-mara Somaliland iyo Soomaaliya oo ka qabsoomay dalka Turkiga ayaa nan kasoo bixin wax natiijo ah, iyada oo rajo wanaagsan laga muujinayo wadaxaajoodyada dhowaan bilaabanaya.
HOOS KA DAAWO MUUQAALKA MUUSE BIIXI
Somaliland oo xabsiga dhigtay Siyaasi rabo inuu maamul cusub dhiso
Somaliland 17.02.2018. 10:19
Siyaasigan ayaa la filayaa inuu kasoo hor-muuqdo Maxkamad kadib markii uu isku dayay...
Muuse Biixi oo shaaciyay 2 qodob uu kula soo heshiiyey Abiy Axmed
Somaliland 24.02.2019. 20:01
​RW Somaliya oo khudbad ka jeediyay Shirka Golaha Guud ee QM
Soomaliya 23.09.2017. 09:02
Somalia: Ammaanka Kismayo oo aad loo adkeeyay
Soomaliya 11.07.2017. 08:19
Wafdi ka socda Masar oo gaarey Somaliland, lana kulmay Muuse Biixi
Somaliland 07.05.2019. 15:08
Somaliland oo loo sameynayo nidaam ay ku helayso deeqaha UN-ka
Somaliland 25.03.2019. 06:19